Tenirohy Maneso Ireo Fisehosehoana Eo Amin’ny Samy Bangladeshita · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2017 6:10 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, বাংলা
Sarin'ny fihaonana nankalazana an'i Pahela Baishakh, iray amin'ireo fety malaza any Bangladesh. Sary avy amin'ny Flickr an'i Aapon. CC BY-NC 2.0
Amin'ny maha-firenena azy dia tena mbola tanora i Bangladesh. Fa raha amin'ny maha-fanjakana azy, dia manana vakoka efa mihoatra ny arivo taona izy. Fikambanam-poko indo-aryan avy amin'ny faritra Bengal taloha any Azia Atsimo ny Bengalis, ankehitriny izany dia mizara eo anelanelan'i Bangladesh sy ny Fanjakana Indianina Bengal Andrefana. Ny faritra dia tao anatin'ny ampira pan-Indiana maro izay nananihana sy nanjakan'ny Mughals sy ny Britanika taty aoriana.
Any Bangladesh, 98%-n'ny olom-pirenena dia anisan'ny vondrona Bengali. Misy fahasamihafana goavana eo amin'ny endrika sy ny fomban'ny Bengalis Bangladeshita noho io tantara io, saingy mazava ho azy fa manana toetra iraisana izy ireo.
Amin'ny hatsikana manindrona, nisy manam-pahazaina teknolojia avy any Bangladesh iray misera Twitter mba hanondroana ny sasany amin'ireo toetra ireo amin'ny fampiasana tenirohy #আমিবাংলাদেশী (#BangladeshitaAho).
Omi Azad dia olona manam-pahaizana teknolojiam-baovao miasa amin'ny orinasa fanoroan-kevitra ara-toekarena sy fampivelarana ny fihariana GDP Global. Mamelona bilaogy iray antsoina hoe Bite Reality izy, izay anoratany lohahevitra isankarazany.
Nandritra ny volana maromaro, nisioka ireo fomba fihetsika ataon'ny Bengali mpiray tanindrazana tsikariny izy. Ohatra, Ireo posiposy entin'olonahita na aiza na aiza eny an-drenivohitr‘i Bangladesh ao Dhaka sy any amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena. Ny mpamily moa dia malaza ny amin'ny fitondrana entana mihoatra ny fetra:
Raha mibaliaka ny masoandro, mafana ny andro, raha latsaka ny orana, amin'ny andro fety, na dia alina aza, dia hahita fialan-tsiny izy ireo amin'ny fangatahana saran-dalana fanampiny.
#BangladeshitaAho mpitarika posy!
Any Bangladesh dia maro ny olona mampiasa rindramaiko piraty na dia afaka mampiasa rindrambaiko misy lisansa aza ry zareo. Naneho izany taminm-pahendrena i Azad:
Afaka mahazo vola ampy amin'ny solosainako aho, kanefa dia tsy handany ariary hividianana lisansa mandrapahafatiko aho. #BangladeshitaAho
Efa ho 30 tapitrisa ny mpisera aterineto any Bangladesh, ary efa roatokony no misera facebook. Mahazatra ny mahita lahatsoratra nosoratana tamin'ny fiteny Bangla amin'ny endritsoratra Romanina fa tsy endritsoratra Bangla natokana ho amin'izany. Tsy ela akory, dia maro ny olona nanolo-tena ho faty niady ny zo ahafahan'izy ireo mampiasa ny fiteny Bangla ao Bangladesh, izay nitarika an'i Azad hanoratra hoe:
Bangla no reharehantsika. Nefa hanoratra mandrakariva ny Bangla amin'ny endritsoratra Romanina aho.#BangladeshitaAho
Amin'ny maha-mpandeha tongotra, tsy mankàto ny lalàna mihitsy ny Bangladeshita, hoy Azad naneho ny heviny:
handeha eny an'arabe hatrany isika. #BangladeshitaAho
Tsy izany irery iany, fa ny Bangladeshita dia tsy hiala eny an'arabe na dia efa ampanenoana anjomaran'ny fiara aza, hoy izy:
Azonao atao ny mamindra elephanta/lalomena/tokatandroka amin'ny anjomaran'ny fiaranao, fa tsy izaho izany. #BangladeshitaAho
Mbola nanome fanehoan-kevitre maneso kokoa i Omi Azad:
Tsy haka vola eny amin'ny GAB/ATM akaiky indrindra aho satria avy amin'ny banky hafa izany ary mampandoa 15 Bangladeshi mihoatra an'ny karatro. Fa aleoko mandoa posiposy, izay mihoatra noho ny andehanana any amin'ny bankiko ny sarandalana. #BangladeshitaAho
Manakarama mpanangona fako isam-bolana izahay. Saingy izahay dia manipy fako eo am-baravarakely etsy amin'ny lalana ambany.#BangladeshitaAho
Tsy fantatray ny fomba fanoratra ny adiresin'ny tranonay. Saingy nahazo GPA 5 izahay tamin'ny fanadinana.
Afa-manomboka ny asanao maraina ao amin'ny biraonao araka ny fotoana mahazatra ianao, saingy tsy manomboka ny androko alohan'ny 10 maraina aho. #BangladeshitaAho mpanamory Uber
Ary na eo aza izany rehetra izany , ny Bangladeshita dia mirehareha sy mahalefitra. Manaparitaka fomba fiteny malaza iray hanehoana izany i Azad:
Lasa lehibe ireo mampieboebo tena. Tsy raharahako izay eritreretin'ny olona. #BangladeshitaAho